Usayizi waphansi: 8984.283 Sq feet
Izimo zemakethe eBahria Town Phase 8 ziphakamisa ukuthi uthathe isinyathelo sokutshala imali zisuka. Uma ufuna indawo enentengo kuma-Rs 22,000, usendaweni efanele. Siyazi ukuthi ubuzokuthokozisa ngesikhathi ohlangabezana nale Flat. Manje, shesha uthathe lo mnikelo. Impahla eBahria Town Rawalpindi ikuvumela ukuthi ufinyelele kuzikhungo ezihamba phambili nezinsiza eziseduze. Indawo ingu-750 Feet Square, ubukade uyifuna! Lokhu kungaba yisakhiwo sokuqasha ongathanda ukusibiza ngokuthi ikhaya. Izici zempahla njengokulandelayo. Lesi sakhiwo sifaka indawo yokwamukela izivakashi eyenziwe kahle. Isimo somoya esimaphakathi ukuze usindiswe ekushiseni okushisayo kwezinyanga zasehlobo. Insizakalo yokulahla imfucuza nsuku zonke iqinisekisa indawo ehlanzekile. Hlala uthokomele ekhaya lakho ngenxa yohlelo lokushisa oluphakathi nendawo. Bhuka ukuqokwa kwakho ngokusishayela ucingo.